Xayiraadi saarneyd xoolaha loo dhoofiyo Sacuudiga oo la qaaday. – Hornafrik Media Network
Xayiraadi saarneyd xoolaha loo dhoofiyo Sacuudiga oo la qaaday.
Hornafrik-Wasiirka Xannaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Soomaaliya Mudane Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in dhoofinta xoolaha dalka ay meel wanaagsan marayaan, lana Qaaday Xayiraaddii saarneyd Dhoofinta Xoolaha Soomaaliya ee Loo dhoofin Jiray Dalka Sucuudiga Taas Oo Lasaaray sanaddii 2016-kii.
Wasiirka Xannaanadda Xoolaha dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Soomaaliya Mudane Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay waxa kale oo uu ku sheegay in 24-kii bishii Augosto ee sanadkii 2017kii shir ay la yeesheen Wasaaradda deegaanka,Biyaha iyo Beeraha dalka Sacuudiga ay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah dalkeenna oo ay ugu muhiimsaneyd in Sacuudiga qireen badqabka iyo caafimaadka Xoolaha Soomaaliya.
Ugu danbeyntii,Wasiirka Xannaanada Xoolaha Soomaaliya wuxuu sheegay in la abuurayo Suuq Cusub oo Ganacsiga Xoolaha Ah.
Deg-Deg Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo goordhaw ka dhacay Muqdisho.